Download Metatrader 4 Mobile App, MT4 Mobile Mobile Forex Trading
Home / Ajandooyinka / Tablet / MT4 for Android
Mashruuca ganacsiga MT4 Mobile waa albaabkaaga suuqyada lacageed, xitaa markaad joogtid, adigoo ku siinaya aragti guud oo ku saabsan dhammaan sifooyinka ganacsiga ee aad jeceshahay inaad isticmaasho mashiinka mashiinka MetaTrader 4 ee abaalmarinta ku guuleystay.
Qalab badan oo ah qalabka wax lagu qoro ayaa hadda gacanta ku haysa si ay u taageeraan dhaqdhaqaaqa ganacsiga - 30 ee tusayaasha farsamooyinka ee aad jeceshahay, wakhtiyada kala duwan iyo sicirka dhabta ah ee dib u cusbooneysiinta suuqa. Hadda waxaa fudud in aad awood u hesho qorshahaaga ganacsiga adigoo u maraya iPhone / iPad / iPod Touch ama Android.
Si aad u heshid akoontiga ganacsigaaga FXCC ee tallaabooyinka fudud ee 3 - kala sooc, geli oo geli mishiinada ganacsiga gacanta isticmaalaya adoo isticmaalaya aqoonsigaaga xisaabta FXCC.
Miiska mobile MT4 waxaad:
Isku xidhiidh koontadaada ganacsiga meel kasta;
Maaree gelitaanka suuqa iyo meeleeyntaada adigoo dhigaya, badalaya ama xiraya xirfadaha;
Codso 30 tusmooyinka farsamooyinka;
Maalgelin adigoo isticmaalaya barmaamij-goboleedka-farshaxanka.